देउवा र थापाले दिए ओलीलाई खुलेरै साथ्, चुनाबी तालमेलका लागि यस्तो छ तयारी ! - Prahar News
देउवा र थापाले दिए ओलीलाई खुलेरै साथ्, चुनाबी तालमेलका लागि यस्तो छ तयारी !
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालेले घुमाउरो तरिकाले प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीलाई साथ् दिएका छन् । शेरबहादुर देउवाले संसद बिघटन सविघान संविधान विरोधी कदम भए पनि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले जुलुस निकालेर यो गर, उ गर भन्न नहुने उनले बताए ।
संसद विघटनको विरोधमा काठमाडौं ५ मा आयोजित प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले मोटो आँखाले हेर्दा ओलीको कदम प्रजातन्त्र विरुद्धको कदम हो, संविधान विरुद्धको कदम हो ।’
तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जुलुस निकालेर यो गर, उ गर भन्न नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ । अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्छ ।’
अदालतले मध्यावधिमा जाने ओलीको कदमलाई सदर गरे कांग्रेस चुनावमा जाने सभापति देउवाले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चभन्दा ठूलो अदालत जनता हो, जनतामा जाँदा के बिग्रन्छ रु’
तर अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्नेमा धेरैलाई शंका रहेको उनले बताए ।
धनगढीमा पुगेर शुक्रबार मात्र ओलीले चुनाव गराउँछु भनेको भन्दै उनले भने, ‘अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो भने सबैले भाग लिन्छन्, प्रचण्डजीहरुले पनि भाग लिन्छन् ।’
तर ओलीले चुनाव गराएनन् भने सबै मिलेर सडकबाटै फाल्ने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसबेला उनलाई देशमा बस्न नै गाह्रो हुनेछ । तर ओली आफैं चुनाव प्रचारमा गइसकेकाले ढिलो चाँडो चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै गरि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनमा आफु केही टिप्पणी नगर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नरहेको र यसको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेकपा नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको दाबी गर्दैै उहाँले ताजा जनादेशको लागि चुनावमा जान उपयुक्त हुने बताउनुभयो । फरक प्रसंगमा अध्यक्ष थापाले संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना पार्टीको पहिलेदेखिको एजेण्डा भएको बताउनुभयो । यही एजेण्डा लिएर आफूहरु जनतामा जाने उहाँको भनाई छ ।
राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशनमा के-के भयो ?
राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशन पुस १७ गते आह्‌वान भएको थियो । आजबाट चालु अधिवेशन सकिएको छ । सातौं अधिवेशनमा जम्मा ४ वटा बैठक बस्यो ।
सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १७ गते शुक्रबार बसेको थियो । पुस २६ गते आइतबारसम्म जम्मा १० दिन चालु रह्‍यो । यस अवधिमा बैठक बसेका चार दिनमा चारवटा बैठक बसी सात घण्टा पाँच मिनेट सभा चलेको थियो ।
यस अधिवेशन अवधिमा सभामा सातवटा अध्यादेश पेस भएका छन् । संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र
समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएको छ ।
सातौं अधिवेशनले राष्ट्रियसभाका समितिहरूको गठनसम्बन्धी आदेश, २०७७ सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, यसै अधिवेशनले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गर्‍यो
आइतवार, पौष २६ २०७७०४:०४:०७